Ireo no lalao maimaim-poana amin'ny volana martsa amin'ny PlayStation Plus | Vaovao momba ny gadget
Tianay ny manaitra anao amin'ny fialamboly nomerika rehetra, manomboka amin'ny Netflix ka hatramin'ny PlayStation Plus ka hatramin'ny Xbox Live Gold. Izany no antony itondranay anao anio izay lalao ôfisialy tonga amin'ny PlayStation Plus mandritra ny volana martsa. Tsarovy fa amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny PlayStation Plus ianao dia afaka mankafy andiana titre maimaim-poana atolotry Sony ho an'ireo mpampiasa azy, amin'ity fomba ity, dia hahita fomba vaovao hifalifaliana ianao. Eto izy ireo ary azonao atao ny misintona azy ireo amin'ny talata ho avy, Ireto ny lalao PlayStation Plus amin'ny volana martsa 2017, aza adino izy ireo ary mijanona miaraka aminay.
Asa be loatra amin'ny Disc Jam ary Tearaway Unfolded, ny lalao ho an'ny PlayStation 4 izay azontsika atao ankafizina ary tonga amin'ny fanoloana ny Little Big Planet 3, lalao izay anoloranay hevitra anao faingana ianao hisintona alohan'ny faran'ny fampidinana maimaim-poana anao amin'ny talata ho avy izao. Ao amin'ny Disc Jam, mampitandrina fa arcade tanteraka izy io, miaraka amin'ny fikasana hampiala voly antsika fotsiny, Fifangaroana hafakely eo amin'ny arcade AirHockey sy ny tennis, Noho izany, na dia tsy manana fampisehoana sary mahavariana aza izy io, dia manana izay ilaina mba hitazomana antsika mandritra ny fotoana lava, hevitra tsara avy amin'i Sony amin'ity lalao ity.
Etsy ankilany manana isika Voasarona ny ranomaso, kinova iray nitarina tamin'io lalao io ihany izay efa ela no nisian'ny PS Vita ary nanangona loka marobe noho ny fametrahana azy sy ny tontolon'ny kanto kanto ao aminy. Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, manana lalao ho an'ny PS Vita sy PlayStation 3 izahay izay avelanay eto ambany:
Eo ambanin'ny alina: in-Birth, PS3
Hery fiarovana an-tany 2025, PS3
Lumo, PS Vita (mividy amin'ny PS4)
Tapaka, PS Vita
Amin'izay mba, hankafizinao amin'ny PlayStation Plus, Ary mitandrema satria amin'ity faran'ny herinandro ity dia hoentinay aminao ny vaovao rehetra avy amin'ny Netflix.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ireo no lalao maimaim-poana amin'ny volana martsa amin'ny PlayStation Plus
Google Pixel Chromebooks miaraka amin'ny Chrome OS dia nifarana